Microsoft sy ny "zava-bita manan-danja" amin'ny haitao fankasitrahana kabary | Vaovao IPhone
Microsoft sy ny "zava-bita manan-tantara" amin'ny haitao fankasitrahana kabary
Alejandro Cabrera | | fifaninanana, About us
Ny mpikaroka Microsoft dia nitatitra izany dia namorona teknolojia fankatoavana kabary vaovao izay mandika ny kabary fitenenana, toa ny olombelona ihany. Ny tahan'ny hadisoan'ny rafitra isaky ny teny dia voalaza fa 5,9 isan-jato., izay sahala amin'ny mitovy amin'ny mpandika soratra matihanina izay nangatahana hiasa amin'ny rakipeo mitovy, hoy i Microsoft.
"Tonga amin'ny fitoviana amin'ny olombelona izahay," hoy ny mpahay siansa Xuedong Huang, izay nanome ny tena fampahalalana tamin'ny fanambarana iray, fiantsoana an'io tsangambato io ho 'zava-bita manan-tantara'.
Mba hahatratrarana ny dingana lehibe, ny tambajotra dia nampiasa tambajotra solosaina sy fitaovana Microsoft, ary koa ny rafitra an-trano ho an'ny fianarana lalina izay natolotry ny ekipa mpikaroka ao amin'ny GitHub tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana malalaka. Ny rafitra dia mampiasa teknolojia tambajotra neural amin'ny vondrona misy teny mitovy aminy, mamela ny maodely hiasa mahomby amin'ny teny iray.
Ny tambajotra Neural dia mifototra amin'ny tahirin-kevitra marobe antsoina hoe "angona fanofanana." ary natsangana izy ireo mba hampianatra ny fandikana solosaina hahafantarana ireo lamina sintaktika amin'ny feo. Mikasa ny hampiasa ny haitao any Cortana i Microsoft, ny mpanampy ny feonao manokana ao amin'ny Windows sy Xbox One, ary koa rindrambaiko fandikana lahateny amin'ny lahatsoratra.
fa mbola lavitra ny lalan'ny teknolojia Alohan'ny ahafahany mamolavola ny dikany lehibe (semantika) sy ny fahalalana manodidina, ny toetra mampiavaka ny fampiasana ny fiteny andavanandro izay mila takatry ny mpanampy manokana, toa an'i Siri, mba handrindrana ny fangatahana sy hampihetsika azy ireo amin'ny fomba mahasoa.
"Miala amin'ny tontolo tsy tokony hahatakaran'ny olona ny solosainan'izao tontolo izao isika kanefa ny solosaina mbola tsy mahatakatra antsika," hoy i Harry Shum, izay mitarika ny vondrona mpikaroka AI an'ny Microsoft. Na izany aza, ho ela vao ho takatry ny solosaina ny tena dikan'ilay voalaza, hoy izy nampitandrina. "Mbola eo amin'ny faravodilanitra lavitra ny tena faharanitan-tsaina".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Microsoft sy ny "zava-bita manan-tantara" amin'ny haitao fankasitrahana kabary
Heveriko fa dingana goavambe izany, ny andro ahafahantsika mifanerasera amin'ny fitaovana nefa tsy mampiasa peripheraly dia hanova tanteraka ny fomba fahatakarana ny fifandraisan'ny olona amin'ny masinina.
Ny iPhone 7, iray volana taty aoriana: traikefan'ny mpampiasa [video]